नेपालमा तथ्याङ्क राख्न थालेको ७० वर्षको अवधिमा असोज–कात्तिकमा भलबाढी आउने गरी वर्षा भएको यो १३औं पटक हो।
काठमाडौंमा रहेका अफगान नागरिक भन्छन्- यता परिवार पाल्ने तनाव छ, उता तालिबानले फेरि देश कब्जा गरेको छ हिंसा र आक्रमणबाट बच्न अफगानिस्तानबाट विभिन्न समयमा भागेर काठमाडौं आएका अफगान नागरिक तालिबानले सत्ता हत्याएपछि देश फर्कने बाटो सधैंका लागि बन्द भएको भन्दै अनिश्चित भविष्यको चिन्तामा छन्।
किन सर्‍यो कांग्रेस महाधिवेशन? २०७६ फागुनमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पटक-पटक सरेको छ। निर्धारित मितिमा महाधिवेशन किन हुन सकेको छैन? यसको लाभ कसले लिइरहेको छ?
सरकारी जग्गा नेताको कब्जामा, कबुलियती वन अन्योलमा सम्भावित अतिक्रमण रोक्न र हैसियत बिग्रिएको वन सुधारका लागि कबुलियती वन बनाउन सरकारले गरेको निर्णयलाई जग्गा कब्जा गरेका उदयपुरका राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिले चुनौती दिएका छन्।
के होला एमालेको भविष्य? कार्यकर्तालाई सान्त्वना दिन नेताहरूले औपचारिक रुपमा पार्टी एकढिक्का हुने आश देखाइरहेको भए पनि फुटको संघारमा पुगेको एमालेमा नेपाल छुट्टिदा हुने क्षतिको लेखाजोखा गर्न थालिएको छ।
दलहरूको कलह, जनतालाई सास्ती
राजनीति मुकेश पोखरेल
प्रमुख दलभित्रको आन्तरिक किचलो झट्ट हेर्दा सम्बन्धित दलको मात्रै सरोकारको विषय जस्तो देखिए पनि यसले देश र जनतालाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
आफन्त विदेशमा, वृद्धवृद्धा एक्लै शरणार्थी शिविरमा
आफन्तजन पुनर्वासमा तेस्रो मुलुक पुगेपछि झापा र मोरङको भुटानी शरणार्थी शिविरमा एक्लै बसिरहेका वृद्धवृद्धा बेसहारा बनेका छन्।
पार्टी फुटाएको अपजस लिन चाहँदैनन् ओली-नेपाल
पार्टी फुटाएको अपजस लिन नचाहने केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको चाहनाले एमाले न फुट न जुटको स्थितिबाट गुज्रिएको छ।
लडाकु दस्तामा प्रतिस्पर्धा : राजनीतिको अपराधीकरण विचार, तर्क र दर्शनबाट निर्देशित हुनुपर्ने राजनीतिक दलले शक्ति संघर्षका नाममा गठन गरेका लडाकु दस्ताले राजनीतिक मुठभेडको जोखिम बढाएको छ।
किन आउँछ मेलम्चीमा पटक-पटक बाढी? मनसुन भित्रिएसँगै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा बाढी आएको डेढ महीनापछि गएराति फेरि ठूलो बाढी आएको छ। पुनःस्थापना हुन नपाउँदै बाढी आएपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्।
बढे बाघ, बढेन वासस्थान बाघको संख्या वृद्धि हुनु जति सुखद छ, यसको संरक्षण र बासस्थान व्यवस्थापनको चुनौती उत्तिकै पेचिलो छ।
एमाले एकता प्रयास : तेस्रो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबारे पनि जुटेन सहमति एमालेभित्रको विवाद मिलाएर अघि बढ्ने मिलनबिन्दुका रूपमा केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल बाहेक तेस्रो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा भएको छलफलमा पनि सहमति जुट्न सकेन।
झन् झन् टाढा एमाले एकता ! माधवकुमार नेपाल पक्षको हस्ताक्षरकै कारण सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेपछि एमाले एकता सम्भावना झनै कमजोर बनेको ओली पक्षको धारणा छ।
के मुलुकको राजनीतिमा अदालत हाबी हुन थालेको हाे ? राजनीतिक दलहरूभित्रको चरम गुटबन्दी, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र आन्तरिक विवादले राजनीतिको लगाम नेताहरूको हातबाट क्रमशः फुत्कँदै गएको देखिन्छ।
ओली–नेपाल भेटवार्ताको 'बाध्यता' अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अहम्‌का कारण नेकपा (एमाले) औपचारिक विभाजनको बाटोमा पुगेको बताइँदै गर्दा एकताका लागि देखिएको पछिल्लो सक्रियता र प्रमुख नेताहरूबीच भेटवार्ता हुनुमा दुवैतर्फको बाध्यता गाँसिएको छ।
केले अड्कायो एमालेमा सहमति? नेकपा एमालेको एकीकरणका लागि चार महीनादेखि जारी प्रयास दुई प्रमुख नेताको अहम् र टकरावका कारण निष्प्रभावी बनेको छ।
निषेधाज्ञामा काठमाडौंमै जंगल मासेर सडक निर्माण काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले निषेधाज्ञाको समयमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान नजिकबाट चम्पादेवीसम्म जंगल मासेर सडक निर्माण गरेको छ।